Merapi, otu n’ime ugwu mgbawa kacha arụ ọrụ na Indonesia, na -efesa larvae, dị ka ihe atụ Jucelino Luz si kwuo. – JucelinoLuz
Merapi, otu n’ime ugwu mgbawa kacha arụ ọrụ na Indonesia, na -efesa larvae, dị ka ihe atụ Jucelino Luz si kwuo.
Águas de Lindóia, Ọgọst 12, 2021
N’ịbụ nke dị n’agwaetiti Java, ọ ga -agbawa na Ọgọst 16, 2021, ígwé ojii ga -ekpuchikwa gburugburu olulu ahụ.
Merapi edebanyela ọrụ siri ike n’ọnwa ndị na -adịbeghị anya ma ndị ọchịchị welitere ọkwa njikere na njedebe afọ gara aga.
Dị ka ihe mgbaàmà si kwuo, ụzọ ahụ nwere ike ịdị ize ndụ yana na ọ dịghị onye kwesịrị ịbịaru nso n’ime kilomita ise nke ugwu mgbawa. Ndị bi ebe ahụ ga -echekwaba onwe ha pụọ ​​na ntụ na osimiri ndị nwere ike ime na Merapi.
Nnukwu mgbawa ikpeazụ nke ugwu mgbawa mere na 2010, na -enwe ọnwụ 300 na ụzọ mgbapụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 280,000, nke Jucelino Luz buru n’amụma, n’akwụkwọ ozi ezigara ndị ọchịchị obodo ahụ.
Agwaetiti Indonesia nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkụ ọkụ ọkụ 130 na -arụ ọrụ, ọ dị mwute na ọtụtụ n’ime ha ga na -abata ọrụ ọtụtụ oge n’ihi okpomoku zuru ụwa ọnụ. Ọdachi kacha njọ bụ imikpu na ọrụ site na mmiri Jakarta nke nwere ike ime na afọ iri anọ na ise, anyị nwekwara nsogbu nke nnukwu ala ọma jijiji 9.0 nke nwere ike ịda na saịtị ahụ na Jenụwarị 16, 2026. egbu oge ntakịrị …)
Echere m na ndị ọchịchị kwesịrị ime ihe iji belata nsogbu nke ndị aka ha dị ọcha nọ ebe ahụ.
Indonesia nwere ndị ọbịa mara mma ma na -ele ọbịa, anyị na -ekpe ekpere maka mmadụ niile ebe a.
Ọ bụrụ na ịmabeghị ọrụ na ọrụ ime mmụọ nke Jucelino Luz, anyị na -atụ aro ka ị zụta otu n’ime akwụkwọ ya edere n’ọtụtụ asụsụ. Pịa na njikọ dị n’okpuru wee họrọ nke kacha mma maka nghọta gị gbasara amụma na amụma ọdịnihu. Soro anyị ma kesaa ọdịnaya anyị. . O jeerela ọtụtụ nde mmadụ ozi site na ngọzi ya na ndụmọdụ ime mmụọ na ume.
Prọfesọ Jucelino Luz – onye na -ahụ maka gburugburu ebe obibi, onye na -eme ihe ike, onye na -emetụta ihe na onye ndu mmụọ
Merapi, eitt virkasta eldfjall Indónesíu, hrýtur lirfur, samkvæmt fyrirboðum Jucelino Luz